उनले मेरो हात स मा ईन भने अर्कीले खु ट्टा, ….त्यसपछि त’न्का’एर का’टि’दिए! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > उनले मेरो हात स मा ईन भने अर्कीले खु ट्टा, ….त्यसपछि त’न्का’एर का’टि’दिए!
उनले मेरो हात स मा ईन भने अर्कीले खु ट्टा, ….त्यसपछि त’न्का’एर का’टि’दिए!
admin May 2, 2021 May 2, 2021 जीवनशैली, रोचक, समाज	0
महिलाको यो’ नि छे’द’न गर्ने एक निर्दयी संस्कारलाई कानूनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएपनि अझै पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा यो प्रचलन कायमै रहेको छ । भारतको एउटा सानो बोहरा मुस्लिम समुदायमा यो कु’प्र’था अझै पनि विद्यमान छ । बोहरा समुदायका महिलाहरुले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस कुसँ’स्कारलाई हटा उन विभिन्न अभियान चालेका छन, तथापी यस कु प्र थामा कुनै कमि आएको छैन् । जसका कारण अधिकांश महिला स्वास्थ्यमा ग’म्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
मासुमा रानालभी सात वर्षकी हुँदा उनकी हजुरअमाले आइसक्रिम र चकलेट किनिदिने प्रलोभन देखाएर घर बाहिर लैजान्छिन् । चकलेट खाने भन्दा उनीमा गदगद हुन्छिन् । ‘म निकै खुसी थिए । तसर्थ उनीसँगै म हिडें,’ उनी स्मरण गर्छिन् । ‘हजुरआमाले मलाई एउटा पुरानो र जी’र्ण भवनमा पु¥याएपछि भने मेरो मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि उनले मलाई एउटा कोठामा लगिन् ।
मलाई भु’इँमा ओ’छ्याइएको एउटा कार्पेटमा बस्न लगाइयो । तत्कालै मेरो पा’इन्ट खो’लियो,’ सो घटनाबारे उनी बे’लिबिस्तार लगाउछिन्, ‘उनले मेरो हात समाईन भने अर्की महिलाले खुट्टा । त्यपछि उनीहरुले मेरो यो’ नी त’न्का’एर केही चिज ‘का’टे । मलाई ख’पिनस’क्नु पि’डा भयो । ड’रले चि’च्चा’ए । त्यसपछि उनीहरुले काटेको ठाँउमा केही का’लो पाउडर छ’र्किदि’ए । पा’इन्ट ल’गाइदिए र हजुआमाले मलाई घर लगिन् । ’
ए’फजी’एमले दीर्धकालिन अशर गर्ने बताइन्छ । यसले म’नोवैज्ञानिक र यौ’न’को दृ’ष्टिले समेत हा’नी गर्ने विज्ञहरु बताउछन् । ‘क्लिनिकल्ली निपूर्ण व्यक्तिले यो कार्य नगर्ने हुँदा विभिन्न समस्या आउने गरेका छ । एफजीएम गर्दा गर्र्दै कतिपय बालिकाको मृ’त्यु समेत भएको छ,’ इन्साफले भनिन् ।
केही वर्ष अगाडि बोहराको उच्च धार्मिक नेता साइड्ना मोहमद बुरहनुद्दिनलाई एफजीएम प्रतिबन्ध गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सो लिखित आग्रहलाई ड’स्टबिनमा फा’लिएको उनी बताउँछिन् । ‘महिलाले हाम्रो धर्मलाई विना तर्क पालना गर्नपर्छ,’ सो समुदायका प्रवक्ता भन्छन् ।
कसरी गरिन्छ यो’नि छे’द’न ?
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिए राजिनामा
घर्म ठूलो कि मानवता? धर्मको नाममा आमाकै अगाडी छोराको घाँटी रेटियो।